စစ်ကောင်စီလက်ထက် လူမှုကွန်ရက်ပေါ် Live လွှင့်ကြေညာလာသော ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း…. - Myanmar Globe
ရန်ကုန် သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင်းက ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ယမန်နေ့ညက ဖေ့စ်ဘုတ်တွင် Live လွှင့်ကာ ကြေညာမှုပြုနေခဲ့ပြီး ၎င်းတို့လုပ်ငန်းသည် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကာလအတွင်း ဖမ်းဆီးမှုများမဖြစ်အောင်စီမံထားနိုင်ခဲ့သည်ဟုပါ အဆိုပါလုပ်ငန်း၏မန်နေဂျာဆိုသူက ပြောသွားခဲ့သည်။
သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ် ၁၆/၂ ရပ်ကွက်တွင်တည်ရှိသော Rainblow Myanmar သည်အနှိပ်ခန်းဟုဗန်းပြကာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေ ရရှိနိုင်ကြောင်း အမျိုးသမီးငယ်များကိုပါပြသကာ ဈေးနှုန်းများပါကြေညာသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်လုပ်သော်လည်း စစ်ကောင်စီတပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကာလ အာဏာပိုင်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်ဟု မန်နေဂျာက Live တွင် ဝန်ခံပြောသွားသည်။
” ကျွန်တော် ၇လပိုင်း ၂ရက်နေ့က စပြီး ဒီမှာ အလုပ်လုပ်တာ ဆိုင်စဖွင့်ကတည်းကအလုပ်လုပ်တာပါ ကျွန်တော်လုပ်နေတာ ခြောက်လ ကျော်ရှိပါပြီ။ ဒီလို ဖမ်းတာတွေ အရှုပ်အရှင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးလည်း ကျွန်တော် ဘာဖိအားပေးတာကိုမှ မကြုံဖူးဘူးဗျ။ လုံးဝအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ လူကြီးပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေ ချောမွေ့အောင် သူတို့ဘာသာ လုပ်ထားပြီးသား အားလုံးစီစဉ်ထားပြီးသားပါ။ ဘယ်လိုပြသနာမှ ရှိလာစရာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိပါဘူး” ဟု သူကပြောသည်။
Rainbow Myanmar ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသည် ကနဦးက သာကေတတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လှည်းတန်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကာ မကြာသေးခင်ကမှ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်သို့ထပ်မံပြောင်းခဲ့သည်။ “ဆိုင်က RK (Rich kids) သီးသန့်ကို အားကိုးတဲ့ဆိုင်မို့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေ ကို လုံးဝထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ ဆိုင်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေလုံးဝမပေါက်ကြားစေရဘူး။ ဓာတ်ပုံရိုက်တာမျိုး ကားတွေနဲ့ ပုံရိုက်တာမျိုး လုံးဝမရှိစေရဘူး” ဟု မန်နေဂျာဆိုသူကပြောသည်။
Live လွှင့်ရာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဒါဇင်ခန့်ကို ပြသမိတ်ဆက်သွားခဲ့သည်။ တရားမဝင်ဖြစ်သည့် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းသည် ယခင်ကတည်းကရှိသော်လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်လူမှုကွန်ရက်တွင် Live လွှင့်ကြေညာရဲသည်ကတော့ရှားရှားပါးပါးဖြစ်သည်။
စဈကောငျစီလကျထကျ လူမှုကှနျရကျပျေါ Live လှငျ့ကွညောလာသော ပွညျ့တနျဆာလုပျငနျး….
ရနျကုနျ သင်ျကနျးကြှနျးမွို့နယျတှငျးက ပွညျ့တနျဆာလုပျငနျးတဈခုသညျ ယမနျနညေ့က ဖစျေ့ဘုတျတှငျ Live လှငျ့ကာ ကွညောမှုပွုနခေဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့လုပျငနျးသညျ စဈအာဏာသိမျးပွီးကာလအတှငျး ဖမျးဆီးမှုမြားမဖွဈအောငျစီမံထားနိုငျခဲ့သညျဟုပါ အဆိုပါလုပျငနျး၏မနျနဂြောဆိုသူက ပွောသှားခဲ့သညျ။
သင်ျကနျးကြှနျးမွို့နယျ ၁၆/၂ ရပျကှကျတှငျတညျရှိသော Rainblow Myanmar သညျအနှိပျခနျးဟုဗနျးပွကာလိငျပိုငျးဆိုငျရာဝနျဆောငျမှုတှေ ရရှိနိုငျကွောငျး အမြိုးသမီးငယျမြားကိုပါပွသကာ ဈေးနှုနျးမြားပါကွညောသှားခဲ့သညျ။ အဆိုပါပွညျ့တနျဆာလုပျငနျးကို ပျေါပျေါထငျထငျလုပျသျောလညျး စဈကောငျစီတပျကအာဏာသိမျးပွီးကာလ အာဏာပိုငျမြားနှငျ့ခြိတျဆကျထားသညျဟု မနျနဂြောက Live တှငျ ဝနျခံပွောသှားသညျ။
” ကြှနျတျော ၇လပိုငျး ၂ရကျနကေ့ စပွီး ဒီမှာ အလုပျလုပျတာ ဆိုငျစဖှငျ့ကတညျးကအလုပျလုပျတာပါ ကြှနျတျောလုပျနတော ခွောကျလ ကြျောရှိပါပွီ။ ဒီလို ဖမျးတာတှေ အရှုပျအရှငျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီးလညျး ကြှနျတျော ဘာဖိအားပေးတာကိုမှ မကွုံဖူးဘူးဗြ။ လုံးဝအေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ လူကွီးပိုငျးဆိုငျရာတှနေဲ့ အားလုံးအဆငျပွေ ခြောမှအေ့ောငျ သူတို့ဘာသာ လုပျထားပွီးသား အားလုံးစီစဉျထားပွီးသားပါ။ ဘယျလိုပွသနာမှ ရှိလာစရာ ဘာအကွောငျးမှ မရှိပါဘူး” ဟု သူကပွောသညျ။
Rainbow Myanmar ပွညျ့တနျဆာလုပျငနျးသညျ ကနဦးက သာကတေတှငျဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီး လှညျးတနျးသို့ပွောငျးရှခေဲ့ကာ မကွာသေးခငျကမှ သင်ျကနျးကြှနျးမွို့နယျသို့ထပျမံပွောငျးခဲ့သညျ။ “ဆိုငျက RK (Rich kids) သီးသနျ့ကို အားကိုးတဲ့ဆိုငျမို့ ကိုယျရေးကိုယျတာအခကျြအလကျတှေ ကို လုံးဝထိနျးသိမျးပေးပါတယျ။ ဆိုငျကိုလာတဲ့ဧညျ့သညျတှရေဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျတှလေုံးဝမပေါကျကွားစရေဘူး။ ဓာတျပုံရိုကျတာမြိုး ကားတှနေဲ့ ပုံရိုကျတာမြိုး လုံးဝမရှိစရေဘူး” ဟု မနျနဂြောဆိုသူကပွောသညျ။
Live လှငျ့ရာတှငျ အမြိုးသမီးတဈဒါဇငျခနျ့ကို ပွသမိတျဆကျသှားခဲ့သညျ။ တရားမဝငျဖွဈသညျ့ ပွညျ့တနျဆာလုပျငနျးသညျ ယခငျကတညျးကရှိသျောလညျး ဖစျေ့ဘုတျလူမှုကှနျရကျတှငျ Live လှငျ့ကွညောရဲသညျကတော့ရှားရှားပါးပါးဖွဈသညျ။